Match tika, Party Fireworks, Cold Fireworks, Stage Fireworks - Wanfu
Zvinokandwa uye zvitundumuseremusere
Sei iwe sarudza
Tine Zvakaitika zvinhu nokuda kunyika dzakawanda. edu zvigadzirwa zvose zvakaitwa maererano mureza kuenda akadai AFSL STANDARD uye American CPSC Regulation, BS7114, EN15947.
Tisati zvacho, isu tiite muchinyatsongwarira yepamusoro kudzora mamiriro: Kubva zvinhu gadziriro rokupedzisira chiputiriso kupinda atorwa. Tichafara kurukurai ose nzira kudzivisa matambudziko uye edza kuitira high quality.
Tine pachedu mafekitari dzedu. asi sezvo vose anoziva, kuti mafayawekisi ane zvinhu zvakawanda kudaro. Saka tinofanira kuchinjanisa vamwe nevamwe mafekitari. Asi, isu achasarudza mafekitari zvakanaka uye akamisa mabviro boka redu zvakanaka.
Kurovedzwa netsvimbo ndiyo pfungwa huru.
tsvimbo vedu vakadzidziswa zvakanaka uye inogona kutaura zvakatsetseka nemi kuti zvako zvinodiwa anogona kunzwisiswa zvachose pasina chero zvikanganiso kunokonzerwa uye ndicharizivisa achirayira mafayawekisi ako nyore uye inofadza ruzivo.
chinangwa chedu ndechokuti kuramba kukudziridza matsva zvigadzirwa zvitsva kuti musika iyo yose, mukavakumikidza kwamuri chemhando yepamusoro uye zvikuru zvemakwikwi mitengo.
Liuyang Wanfu Fireworks Co., Ltd. chinhu nyanzvi mafayawekisi mugadziri uye ekisipota, iri Liuyang, China. Tine maviri mafayawekisi mafekitari imwe fekitari chiputiriso rokudhinda. The mafayawekisi mafekitari vane makore anopfuura 15 kuti kubudisa ruzivo. We akamisa chikwata zvakanaka zvigadzirwa kusimukira, pamasikiro, kudhinda, unobereka, kuti yakamboita kuzvidzora, okuchengetera uye selling.We kunyanya zvibereko uye kutengesa siyana mafayawekisi: zvakadai vanoratidza uye nevatengi makeke, Magic kurira kwepfuti, makenduru Roman, Ground spinners, Helicopters, toy mafayawekisi, namatsime, atirari goko, Birthday mwenje, isina chiutsi pechikuva mafayawekisi ...
LIUYANG WANFU hwemoto CO., LTD.
LIUYANG WANFU Export mafayawekisi fekitari
LIUYANG HEXIE chiputiriso pakudhinda Factory
Office wedzera: 5F, Block C1, New Moon Peninsular, Jiangjun Road, Liuyang, Hunan, China
Factory1 Wedzerai: Qucheng Village, Chengtanjiang Town, Liuyang, Hunan, China
Factory2 Wedzerai: Hehua Industrial District, Yangjianong, Liuyang, Hunan, China
Website: www.wanfufireworks.com (Chirungu)
Name Yemhomho Email